Sunday February 09, 2020 - 11:25:35 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Askari katirsanaa ciidamada melleteriga Thailand ayaa weeraray goob suuq ah oo ay ka tukaamaysanayeen kumanaan qof, saraakiisha booliska ayaa sheegay in askari hubaysan uu rasaas oodda uga qaaday dad ku sugnaa hareeraha macbad kuyaal magaalada Nakhon Ratchasima.
Ugu yaraan 21 qof ayaa dhimatay halka 30 kale ay dhaawacyo soo gaareen, askariga weerarka geystay ayaa toogtay dad mushrikiin ah oo ku sugnaa Macbad Buudiyiintu leeyihiin kadibna wuxuu usii gudbay suuq laga tukaamaysto waxaana halkaas ka dhashay khasaaraha ugu badan.
Weerarkan oo ka dhacay magaalada Nakhon Ratchasima ee dhacda waqooyi Bari Thailand waxaa geystay askari ka goostay ciidamada, Video ay duubtay Kaamirada muraaqabada ee CCTV-ga loo yaqaan ayaa muujinayay askariga oo si aan kala sooc laheyn u tooganaya dad gaalo ah.
Taliyaha ciidamada Booliska Thailand ayaa warbaahinta u sheegay in ciidamadoodu ay toogasho ku dileen askariga xasuuqa ugeystay dadkii ku sugnaa suuqa laga tukaamaysto iyo macbadka.
Qoraal kooban oo weerar yahanku dhigay bartiisa Facebook-ga ayuu dadkii suuqa ku sugnaa ugu baaqay in ay isdhiibaan ama ay goobta isaga cararaan haddii kale ay dhimasho wajahi doonaan.
Mas'uuliyiin u hadashay dowladda Thailand waxay sheegeen in askariga xasuuqa ka geystay ka hor uu weerar ku qaaday saldhig ciidan kadibna uu kasoo qaatay qori nuuca darandooriga udhaca iyo rasaastiisa dadka uu laayayna waxaa kamid ah askar katirsan ciidanka Melleteriga.